EasyJet waxay ka duushaa Gatwick Airport iyadoo shidaal ku haysa Duulista Hawada
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Airport » EasyJet waxay ka duushaa Gatwick Airport iyadoo shidaal ku haysa Duulista Hawada
Airlines • Airport • Aviation • Jebinta Wararka Yurub • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Dib-u-dhiska • Waajib ah • Technology • Dalxiiska • Gaadiidka • Warka Safarka Safarka • Wararka UK
EasyJet waxay ka duushaa Gatwick Airport iyadoo shidaal ku haysa Duulista Hawada.
Wadar ahaan 42 duulimaad oo easyJet ah oo ka hawlgala Gatwick Airport ayaa lagu xoojin doonaa 30 boqolkiiba Neste MY Sustainable Aviation Fuel blend.
Markii ugu horraysay duulimaad ka baxaya Gatwick ayaa adeegsaday shidaalka duulimaadka ee waara (SAF).
Q8Aviation ayaa gaarsiisay sahaydii ugu horreysay ee Neste MY Sustainable Aviation Fuel shidaalka Gatwick Airport.
Waxay xaqiijineysaa ballanqaadka xooggan ee dhammaan dhinacyada ku lugta leh si loo gaaro dhimis qiiqa kaarboonka ee shidaalka loo isticmaalo duulista iyo ka shaqeynta yoolka kama dambaysta ah ee duulimaadyada si loo gaaro qiiqa eber ee 2050.
Iyadoo kii hore uu maanta baxayo, wadar ahaan 42 duulimaad oo ah EasyJet oo ka hawlgala Madaarka Gatwick waa in lagu xoojiyaa 30 boqolkiiba Neste MY Sustainable Aviation Fuel ™. Dhacdadan muhiimka ah waxay astaan ​​u tahay markii ugu horraysay ee duulimaadka Gatwick uu isticmaalo shidaalka duulimaadka ee waara (SAF) sidoo kale waa adeegsiga ugu horreeya ee adeeg kasta oo fududJet. Waxay xaqiijinaysaa ballanqaadka xooggan ee dhammaan dhinacyada ay khusayso - bixiyaha shidaalka duulista hawada Q8Aviation, EasyJet, Gatwick Airport Ltd iyo Neste - si loo gaaro dhimis kaarboonka saafiga ah ee shidaalka loo isticmaalo duulista oo laga shaqeeyo yoolka ugu dambeeya ee duulimaadyada si loo gaaro qiiqa eber ee 2050.
42 duulimaad oo ku socda Neste MY Sustainable Aviation Fuel, 39 ka mid ah ayaa noqon doona EasyJet duullimaadyada ka shaqeeya Gatwick ilaa Glasgow inta lagu guda jiro Shirka Isbeddelka Cimilada ee COP26, kaasoo soconaya 31st Oktoobar ilaa 12ka Nofembar. Dhammaan 42 duulimaad, qiiqa gaaska cagaaran ayaa la dhimi doonaa ilaa 70 tan taas oo sii tilmaamaysa ujeeddooyinka warshadaha ee ah in la yareeyo qiiqa gaaska aqalka lagu koriyo ee koorsada si loo gaaro qiiqa eber ee 2050.
Q8Aviation ayaa gaarsiisay sahaydii ugu horreysay ee Neste MY Sustainable Aviation Fuel si ay u siiso shidaalka Madaarka Gatwick. Shidaalka duulimaadka joogtada ah ee Neste, oo si buuxda u shahaadaysan, waxaa laga soo saaraa 100% qashinka la cusboonaysiin karo oo waara iyo alaabta ceeriin ee hadhay, sida saliidda wax lagu karsado ee la isticmaalo iyo qashinka dufanka xoolaha. Qaabkeeda hagaagsan iyo wareegga nolosheeda, Neste MY Sustainable Aviation Fuel waxay gaari kartaa dhimis ilaa 80%* ee gaaska aqalka dhirta lagu koriyo marka la barbardhigo isticmaalka shidaalka diyaaradda fosil.
Neste-soo-saare SAF waxaa lagu dhex daray shidaalka Jet A-1 oo ku yaal bakhaarka sare ee Gatwick Airport si loo abuuro shidaal hoos-u-dhac ah oo la jaan qaadi kara matoorada diyaaradaha jira iyo kaabayaasha garoonka, iyada oo aan u baahnayn maalgelin dheeraad ah. Q8Aviation wuxuu shidaalka gaarsiiyey haamaha kaydka weyn ee Gatwick Airport si loogu keeno diyaaradaha easyJet iyada oo loo sii marayo nidaamka biyo -mareenka ee garoonka.
Ku -biirinta SAF hawlgallada Gatwick ee duulimaadka maanta ayaa caddeyn muhiim u ah fikradda gegida dayuuradaha si ay u muujiso sida ay uga go'an tahay inay kala shaqeyso la -hawlgalayaasheeda duullimaadka dearbonization -ka. Raadka kaarboonka ee Gatwick ee 2019 ayaa muujiyay in gegida dayuuradaha ay markeedii hore ahayd nus-eber si ay hawlaheeda u gaarto waxaana ka go'an inay gaarto qiiqa tooska ah ee Net Zero marka la gaaro 2040.
Jonathan Wood, Madaxweyne ku -xigeenka Yurub, Duulimaadka Cusboonaysiinta ee Neste ayaa yiri: “Warshadaha duulista ayaa durba qaaday tallaabooyin muhiim ah si loo yareeyo saameynta deegaanka. Qodobka ugu muhiimsan ee lagu gaari karo tan waa hordhaca ballaaran ee shidaalka duulimaadka ee waara. Neste ayaa maalgashanaysa sida aan u hadlayno si kor loogu qaado awoodda wax -soo -saarka SAF oo laga bilaabo 100,000 metric ton ilaa 1.5 milyan metrik ton sanadkiiba 2023. Neste waxay soo dhaweynaysaa soo jeedinta dawladda si loo dhiirri -geliyo adeegsiga SAF si loo yareeyo qiiqa gaaska cagaaran. Waxaa muhiim ah in marba marka ka dambaysa ay sii kordhayaan shirkadaha diyaaradaha, garoomada diyaaradaha iyo alaab -qeybiyeyaasha shidaalka oo u horseedaya mustaqbal waara oo duulimaadka ah. Waan ku faraxsanahay inaan soo dhaweyno easyJet, Q8Aviation iyo Gatwick Airport oo ka mid ah kuwa ugu cadcad. ”
Naser Ben Butain, Maareeyaha Guud Q8Aviation ayaa yiri: “Waxaan ku faraxsanahay inaan kaalinteenna ka qaadanno bixinta shidaalka duulimaadka ee ugu horreeya ee sahlan ee Jet ee Gatwick. Waxaan iskaashi xoog leh la samaynay shirkadda EasyJet sanado badan, waxaana ka faa'iidaysanaynaa taageero aad u wanaagsan oo ka timid Gatwick Airport Ltd iyo Neste, waxaana rajeyneynaa inaan si dhow ula shaqeyno dhammaan la -hawlgalayaasha si aan u sii wadno ujeeddooyinkeenna waara.
Jane Ashton, Agaasimaha Joogtaynta ee EasyJet wuxuu yiri: “Marka loo eego EasyJet, waxaan rabnaa inaan kaalinteenna ka qaadanno sidii aan u hoggaamin lahayn burburinta duulista hawada. Waxaan ku faraxsanahay inaan ku dhawaaqno in maanta aan ku shaqeyneyno annagoo adeegsaneyna SAF caddayn duulimaadka fikirka ah ee Gatwick annagoo sidoo kale ballan -qaadnay adeegsiga isku -darka SAF ee dhammaan duullimaadyada ka shaqeeya Gatwick ilaa Glasgow inta lagu jiro COP26 oo dhan, taas oo ay ugu wacan tahay dadaalka wada -shaqeynta ee aannu la leenahay shuraakadayada mashruucan. Helitaanka SAF weli waxay u baahan tahay inay koraan laakiin waxay noqon doonaan xal muhiim ah oo ku-meel-gaar ah oo ku jira wadadeena qashin-qubka, halka aan taageereyno horumarinta diyaaradaha eber-ka-baxa, kaasoo noqon doona xalka ugu waara ee shabakadaha gaagaaban sida kuwayaga muddada dheer. Dhanka kale, waxaan u shaqeyneynaa duulimaadyadeena sida ugu macquulsan uguna macquulsan oo hadda ah diyaaradda kaliya ee ugu weyn Yurub ee ka dhigaysa qiiqa kaarboonka shidaalka loo isticmaalo dhammaan duulimaadyadeena, oo hadda saameyn ku leh. ”
Tim Norwood, Agaasimaha Arrimaha Shirkadaha, Qorshaynta iyo Joogtaynta Gatwick Airport ayaa yiri: “Aad ayaan ugu faraxsanahay inaan la shaqeyno EasyJet, Q8Aviation iyo Neste si aan u muujino adeegsiga SAF ee Gatwick Airport. SAF waa mid ka mid ah dhowr siyaabood oo duulimaadyada UK iyo Gatwick ay ku gaadhi doonaan kaarboonka eber 2050, oo ay weheliso kaarboonka, casriyeynta hawada iyo hal -abuurka joogtada ah ee teknolojiyadda hawada, oo ay ku jiraan korontada, hydrogen iyo nidaamyada diyaaradaha isku jira. Iyada oo leh siyaasad Dawli ah oo caqli badan oo lagu xoojinayo maalgashiga qiimaha wax-soo-saarka SAF ee UK ee tartanka, duullimaadyo badan oo kale ayaa laga yaabaa inay adeegsadaan SAF-ta UK soo saartay badhtamaha 2020-ka. Gaaritaanka qiiqa Net Zero ee 2050 labaduba waa caqabad weyn iyo fursad u ah warshadeena. Qorshe -hawleedka dearbonization -ka ee Duullimaadka Joogtada ah iyo yoolalka ku -meel -gaarka ah waxay dejiyeen taariikho cad waxaanan diyaar u nahay inaan kaalinteenna ka ciyaarno Gatwick, annagoo adeegsanayna hirgelinta khariidadda tobanka sano ee ugu horreysa iyo inaan sii wadno cusboonaysiinta khariidadda si loogu daro xalal farsamo oo dheeri ah sannadaha 2030 -ka. ”
شات بنوتة wuxuu leeyahay,
Oktoobar 29, 2021 at 19: 41
Wow, waa maqaal aad u fiican. Aad ayaan uga helay Waxaan rajeynayaa inaad ku sii wadi doonto maqaallada noocaas ah. Mahadsanid. Salaan calaykum.
Oktoobar 20, 2021 at 13: 29